जनयुद्धमा प्रचण्ड नामै नसुनी साहदत, शान्ति प्रक्रियामा दलाल र भ्रष्ट ? : प्रचण्ड – Etajakhabar
काठमाडौँ- नयाँ शक्तिबाट अलग भएको देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूह माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ शक्ति नेपाल वृहत ध्रुविकरण समन्वय समिति गठन गरेर पौडेलले माओवादी केन्द्रसँग एकता गराएका हुन् । राजधानीको एक पार्टी प्यालेसमा मंगलबार एकता घोषणा गरिएको थियो । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरु एक ठाउँमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले माओवादी शक्ति मात्र नभई परिवर्तनकारी सवै शक्तिहरु एक हुनुपर्ने नीति पास गरेका छौँ’ उनले भने ‘सोही अनुसार उत्पिडित जाति समुदाय लगायत सबै परितर्वनकारी शक्तिको नेतृत्व माओवादीले गर्ने गरी एक हुनुपर्छ ।’
प्रचण्डले इतिहासमा फरक खालको अनुभुति गर्ने अवसर विलरैलाई प्राप्त हुने बताए । ‘जनयुद्धमा सबै शक्ति केन्द्रिकृत थियो । त्यो जनयुद्धको सुप्रिप कमाण्डरको रुपमा नेतृत्व गरेँ । त्यतिबेला धेरै नेता–कार्यकर्ताले प्रचण्ड भन्नासाथ ज्यान फाल्न तयार हुन्थे, कतिपयले मलाई देख्न नपाई ज्यान गुमाए ।’ उनले स्मरण गर्दै भने ‘शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड विग्रियो । दलाल भयो । नेपालकै भ्रष्ट भयो भनेको पनि आफैले सुन्नु प¥यो ।’ विभाजित माओवादीलाई एक बनाउँने जिम्मेवारी आफ्नो काधमा आएको प्रचण्डले तर्क छ । ‘पार्टी फुटाउँदा वैद्यजीले सिद्धान्त बचाएर जान्छु भन्नुभयो । तर तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, केही पनि भएन ।’ प्रचण्डले भने, ‘बाबुरामजी केजरीवाले झै के–के न गर्छु भनेर जानुभयो । उहाँले पनि केही गर्न सक्नुभएन । विप्लव पनि केही गर्न होइन प्रचण्ड बन्न जानुभएको हो । उहाँको पार्टीको अवस्था पनि तपाई हामीले देखेकै छौँ ।’ कार्यक्रममा पौडेलले धुर्वीकरण र एकता रहर नभई बाध्यता भएको बताए । ‘प्रतिक्रियावादीहरुले परितर्वनलाई उल्टाउँन खोजेकाले सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक भएका छौँ’ पौडेलले भने ।
नयाँ शक्तिबाट को–को आए ?
देवेन्द्र पौडेल, वामदेव क्षेत्री, कुमार पौडेल, महेन्द्र पासवान, मुक्ति प्रधान, पासाङ शेर्पा, सुशीला शेर्पाली, बलावती शर्मा, तिलक थापा, परशुराम तामाङ, पासाङ शेर्पा, अमरध्वज लामा, वाहिद अन्सारी, हरि चौलागाई, शर्मिला तामाङ, रत्न राना र रवीन्द्र सुनारसहित नयाँ शक्ति संघीय परिषदका २ सय ५० नेता माओवादी केन्द्रमा गएका छन् ।
नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न कार्यदल
पार्टी एकता भएपछि नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न एक कार्यदल बनाएको छ । सबै नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सात प्रदेशमा सात कार्यदल गठन गरिएको छ । केन्द्रमा रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा संयोजन कार्यदल बनेको छ । सोही कार्यदलमा देवेन्द्र पौडेल, परशुराम तामाङ, मातृका यादव, बामदेव क्षेत्री, महेन्द्र पासवान, कुमार आले, पासाङ शेर्पा, विश्वभक्त दुलाल र पदम खड्का छन् । त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर १ मा गोपाल किराँती, सावित्री काफ्ले, पासाङ शेर्पा र टेकमान राई छन् । प्रदेश नम्बर २ मा विश्वनाथ साह, महेन्द्र पासवान, जुवेद अन्सारी र हरि चौलागाईं तथा प्रदेश नम्बर ३ मा कुमार पौडेल, हितमान शाक्य, अमरध्वज लामा र झक्कु सुवेदी छन् । यस्तै प्रदेश नम्बर ४ मा हरि अधिकारी, बलावती शर्मा, देव गुरुङ र भानु अधिकारी तथा प्रदेश नम्बर ५ मा वर्षमान पुन, पूर्ण घर्ती, बामदेव क्षेत्री र सुशीला श्रीपाइली छन् । यस्तै ६ नम्बर प्रदेशका गठित संयोजन कार्यदलमा शक्ति बस्नेत, माया प्रसाद शर्मा, रत्न रानामगर र बलराम पुन तथा सात नम्बर प्रदेशमा लेखराज भट्ट, लक्ष्मण जोशी, ललित ठगुन्ना र रविन्द्र सुनार कार्यदलमा छन् ।
वीरेन्द्र अाेली, नयाँ पत्रिका
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ०७, २०७४ समय: १०:११:२९